Misy antoka ny nify, nono, fitombenana… an’ireo olo-malaza
Bruce Willis, Clint Eastwood… Nalaza tampoka, noho ny vintana
Mandalo ihany ny vintana, ka mila mahay manararaotra izany ! Noho io vintana io nandalo teo amin’izy ireo indrindra, no nahatonga ireto mpilalao sarimihetsika ireto ho lasa malaza dia malaza.
Fihenan-danja mahagaga an-dry Amel Bent, Kendji Girac…
Mahagaga ny nahavery lanja ireto olo-malaza ireto. Fa nataon’izy ireo laharam-pahamehana ny fikoloana ny vatany sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary tena nanampy azy ireo betsaka izany
Misy ny fahafatesana azo lazaina hoe : tsara. Misy kosa ireo olona no maty ao anaty fijaliana tanteraka nefa misy olona maty amin’ny fotoana tena mety. Io no
Misy ny fahafatesana azo lazaina hoe tsara. Misy kosa ireo olona no maty ao anaty fijaliana tanteraka nefa misy olona maty amin’ny fotoana tena mety.
Tsy nahatsiaro sambatra ireto olo-malaza ireto raha tsy nanova fananahana. Lehilahy izy ireo tany am-boalohany ary nivadika ho vehivavy, na vehivavy no nivadika ho lehilahy. Ny sasany nanova fiakanjo fotsiny, fa ny sasany tena nanova taovam-pananahana mihitsy, tamin’ny alalan’ny fandidiana.
Max Ehrich : namoy fo tanteraka ilay nosarahin’i Demi Lovato
Vao roa volana monja no nanao fangatahana an’i Demi Lovato ho vadiny i Max Ehrich dia efa nisaraka sahady izy ireo. Tsy mora ny fisarahana saingy nahita marimaritra iraisana izy ireo.
Tsy fantatra izay loza tampoka mety hitranga. Maro ireo olo-malaza no manisy fiantohana amin’ireo faritra amin’ny vatany, izay tena miantoka ny lazany.
1. Ny an’i Julia Roberts izao dia ireo nifiny no misy fiantohana. Raha sanatria misy loza tampoka mitranga ka simba ny nifiny dia mitentina 27 tapitrisa euros ny antoka amin’izy ireo ka honerana aminy izany.
2. Tsy vao i Julia Roberts anefa no nanan-kevitra toa izany, fa voalohany tamin’ireo nanisy fiantohana ny faritry ny vatany i Madonna. Ny nonony indray, ny an’ity mpanakanto ity no nasiany antoka ka mahatratra 2 tapitrisa euros izany.
3. Mifanohitra amin’izany ny an’i Kim Kardashian, satria ny fitombenany indray kosa ny azy no nasiany antoka. 20 tapitrisa euros io antoka io sy honerana aminy raha sanatria misy mahavoa ireo fitombenany ireo izany.
4. Satria ao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra no misy an’i Christiano Ronaldo, fanatanjahan-tena izay tena hampiasany ireo tongony roa. Ireto farany noho izany no nasiany antoka ka fantatra fa maherin’ny 50 tapitrisa euros io antoka io.